कलियुगका कुरा: पशुपति वरपरको बनमा शव गाड्ने कि नगाड्ने...
पशुपति वरपरको बनमा शव गाड्ने कि नगाड्ने...
क्रिश्चियन र केही आदिवासीले आफन्तको शव गाड्न पाउनु अधिकार हो। तर शव गाड्दै, त्यसमा सिमेन्टका स्मारक बनाउँदै जाँदा बन बिनास हुनेभो। शव गाड्ने ठाउँ पाउन छोडेर क्रिश्चियनहरु जलाउने अवस्थामा सम्म पुगे भने आदिवासीहरु शव गाड्न नपाएको भन्दै जुलुस निकाल्न थालेका छन्।
पशुपतिनाथ वरपरको बनमा शव गाड्न नदिएपछि झडप हुनथालेको छ। एउटा शव गाडेको ठाउँ, अर्को शव गाड्न उपर्युक्त हुन वर्षौं लाग्छ। अझ कतिपयले शव गाडेको ठाउँमाथि कंक्रिटका स्मारकहरु बनाउँछन्। जसले गर्दा न त्यहाँ केही विरुवा नै उम्रन हुर्कन पाउँछ न त्यहाँ केही वर्षपछि नयाँ शव गाड्नै मिल्छ। नयाँ नेपालमा धार्मिक तनाव वढ्नु पहिले यो समस्याको समाधान निस्कियोस्....
Nira Ranabhat, Rajendra Aryal, Suraz Kharel and 22 others like this.
Sunita Giri At the same time they refused to be Hindu and looking for the last place in the Hindu's sacred place is also so Paradox, is not it ?
Sajana Timalsina Yo ta suruwad matra ho Naya Nepal ta dekhna baki6..
Ballav Timalsina kura sahi ho !
पशुपतिकै छेउमा लगेर गाड्न पाउनु पर्छ भन्नु सिँगौरी खेल्न जानु मात्रै हो जस्तो लाग्छ । हिन्दुमा जस्तो शव गाड्न कुनै विशेष महत्वको स्थान चाहिने नहुनाले बस्ती भन्दा पर कतै प्लटिङ गरेर crematorium बनाउँदा उचित हुन्छ होला । क्रिश्चियनहरुले पनि शव गाड्दा पूर्ण सुरक्षाका साथ त्यसले पछि असर नगर्ने गरी विधिवत रूपमा गाड्नु पर्छ । यहाँ (नेदर्ल्यान्डमा) बस्तीका बिचमै crematorium देख्न पाइन्छ । अनुशाषित र मर्यादित रुपले अरुको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी एक अर्काको जीवनशैली लाइ कदर गर्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन । एक पक्षले 'हैन, गाड्न दिँदैनौँ, जे सुकै गर' भन्नु र अर्को पक्षले 'हामीलाइ पशुपतिमै चाहिन्छ' भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले अशान्ति बाहेक केहि मच्चाउँदैन । यस विषयमा दुवै पक्षले लचकता अपनाएर पशुपति क्षेत्र बाहेक अन्यत्र नयाँ व्यवस्थित crematorium खोले राम्रो होला ।
मेरो बिचार मा हाम्रो भोलिको नया नेपाल भनेको क्रिस्चियन र मुसलमान को आधा आधि मा विभक्त नेपाल हो; हिन्दु धर्म लाइ हामीले आफै सामन्ती, अन्ध विश्वासी आदि भनेर तिरस्कार गर्दै छोड्दै गइ रहेका छौ, त्यसैले यो पशुपति लाइ अहिल्यै क्रिस्चियन र मुसलमान को बीच मा भाग बण्डा गर्दिए हुन्छ;
नेता हरु ले हत्त न पत्त धर्म निरापेक्ष्य घोषणा गरेको पछाडी यी ६०१ सबै को खल्ती क्रिस्चियन डोनर हरु को नोट को बिटा ले टन्न भरिएको छ भन्ने कुरा हामीले दोहोर्याएर सोचेनौ; हेर्दा प्[राजातान्त्रिक जस्तो देखिए पनि धर्म निरापेक्ष्यता खालि क्रिस्चियन धर्म फैलाउन र नेपाल का मौलिक धर्म हरु को पलायन गर्न गरिएको थियो भनेर भन्दा यहि ब्लग का साथीहरु ले मलाइ गालि गर्नु हुने छ होला;
अब रोएर केहि हुदैन, पशुपति बेचौ, डोनर हरु ले राम्रै पैसा दिन्छन; अहिले बेचेनौ भने पनि त्यसको चारै तिर गाइ बधशाला बन्ने छ, जग्गा हरु मा मसजिद र चर्च चिहान ग्रिह बन्ने छ, र बिस्तारै मन्दिर मात्र बाकि रहने छ, र त्यो पनि मिचिदै किचिदै अन्त्यमा नस्ट भएर जाने छ; हामि नेपालि हरु उदार र क्रान्तिकारी छौ, त्यसैले हामि आफ्नो टाउको मा आफै बन्चरो हान्दछौ
‎@Manusi Ji, yati niras bhai halnu pardain
मेरो बिचार मा वास्तवमा हिन्दू धर्म कुनै धर्म नै होइन ... हिन्दू हुनु भनेको नै धर्म निरपेक्ष हुनु हो । किन भने हिन्दू धर्म त धर्म हरु को पनि धर्म, महाधर्म हो, सनातन धर्म । संसारमा प्राय सबै धर्महरु आफ्नो समर्थक बदाउन उसका पर्बर्तक को कुरा नमाने जती सुकै सत्कर्म गरे पनि नर्क मा जाक्ने धम्की को भाषा बोल्छन । आफ्नो धर्म इतर का ब्यक्तीलाई सफया गर्न उस्काउछन । तर हिन्दू धर्म का ग्रन्थ हरु मा जो हिन्दू होइनन उनी हरु लाई पनि बेद सँग नबझिएको हद सम्म र मानबिय हित लाई दखल गर्दैन भने आफ्नो प्रथा र परम्परा अनुसार चल्न सुझाँउछ । "हिन्दू धर्म मा न्याय नै धर्म हो ।" बाँकी कुराहरु बर्णन र व्याख्या गर्दा आएका हुन ।
जसरी एउटा राजनीति शास्त्रका प्रोफेसर कुनै एक वाद हिमायाती पनि हुन सक्छन तर मुलत ऊ राजनीति शास्त्री हो । त्यसै गरी हिन्दू धर्म बाट बैश्णब, जैन, बौद्ध, थुप्रै योग एबम अध्यत्मिक मार्ग हरु सुरु भएका छन । विश्वमा प्रचलित बाँकी धर्म लाई पनि त्यही दृष्‍टि ले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर इसाइ र मुसलमान धर्म को अति बाद बाट विश्व लाई बचाऊन हिन्दू लगायत, नास्तिक, मानबताबादी, अस्तित्वबादी हरु आदी ... एकदमै चनाखो रहन र उपयुक्त कदम चाल्न तयार बस्नु जरुरी चाँही अबस्य छ ।
यहुदी धर्मावलम्वीहरुका मानव चिहानहरु प्राय गिर्जाघरको वरिपरि हुने गर्दछन् । बढ्दो जनसंख्या सँगै यसलाई विस्तारै व्यवस्थित गर्न हिजोआज ठुला ठुला शहरमा सरकारी तबरबाट नै कुनै ठाँउ चिहानको लागि छुट्याइएको हुन्छ । तर चिहानबाट सर्न सक्ने सरुवा रोगकिटाणु र सामाजिक सरसफाईको लागि त्यस्ता ठाँउलाई विषेश ध्यान दिनपर्ने हुन्छ त्यसैले हिजो आज यसलाई बस्तीबाट अलि टाढा बनाउने चलन छ । शहरमा चिहानको लागि छुट्याइएको जमिन मानिसहरुले किनेर प्राप्त गर्दछन् । हिन्दुहरुको आस्थाको प्रतिक पशुपतिमा नै लास गाड्न पाउनु पर्छ भन्नु राम्रो लागेन । त्यहाँ जमिन कम भएकोले पनि त्यो संभव हुँदैन । त्यसमाथि पनि भोलि फेरि हिन्दुहरुले यहुदीको गिर्जाघर अगाडी लास पोल्न पाउनु पर्छ भनेमा के गर्ने ? धार्मिक सद्भाव भनेको कुरा कानुनमा लेखिने कुरा होइन यो र परम्परा र चलनले स्थापित गर्ने कुरा हो जुन प्राय अलिखित हुन्छ ।
Prmd Npn नागार्जुनां नहुने रे त ??
Maan Rokaya अधिकार को दुरोपयोग हुनु र गर्न खोज्नु चिन्ता जनक कुरो हो, अधिकार भन्ने हो भने टुडिखेल मा लगेर गाडे भो त? सम्पदा किन बिगार्ने ??
eracube Alankar Aryal
कुरा सहि हो @rabindrarijal @dipakbhattarai @SubasPokharel@friendycalls @aakarpost @krishol पशुपति नै चाहिन्छ भनेर हल्ला गर्नु चैँ ठिक लागेन
rabindrarijal Rabindra Rijal
@dipakbhattarai @SushilPokhrel @SubasPokharel @friendycalls@aakarpost @eracube @krishol पशुपति नै चाहिन्छ भनेर हल्ला गर्नु चैँ ठिक लागेन।
BishalGautam Bishal Gautam
@DipakBhattarai sabai le laas gadh6n, but yo 0.2% lai matra kina Thau na-pugeko. Katai ATI-KRAMAN ta hoina
friendycalls Friendycalls Npn
@dipakbhattarai नागर्जुनां नहुने रे त ??
@dipakbhattarai In Nepal there are only 0.2% or 0.02% christians. 4/5% jati muslim, 7-10% Buddhist, even kehi hindu like YOGI, GIRI contd
@dipakbhattarai बौद्धमार्गीहरु ले पनि गाड्ने नै गर्छन, सायद मुस्लिम ले पनि गाड्छन क्या'र ! अहिले किन, क्रिश्चियन ले निहुँ खोजेका हुन् ?
@dipakbhattarai यति का वर्ष जहाँ गाडेका थिए, त्यँही गाड्न दिनुपर्छ, पशुपति बाहेक ! पैसा का बल ले धर्म परिवर्तन गराएजस्तो, सजिलो त कहाँ छ र !
@dipakbhattarai गौशाला मै या भनौँ, पशुपति क्षेत्रमै चिहान गाड्न पाउनुपर्छ भनेर, उनिहरुले निहुँ नै खोजेका हुन् ।
nepaleeidiot NAULO MANCHHE
@aakarpost @dipakbhattarai त्यसो गर्दा फेरी बाहुनवाद लद्याए हामी माथी भन्लान, धर्मनिर्पेक्षताको कुरो उठाउलान .. सारो अफ्ठेरो
@dipakbhattarai पशुपतिनै चाहिन्छ भन्नु पनि क्रिस्तानीहरुको मुर्खता हो । जहाँ गरे नी भो नी । तथापी, दाजु, अरु ठाउमा त गाउँलेले गर्न दे पो?
@dipakbhattarai त्यसो त पानी नखाए भो, सिद्धेला, आदि ईत्यादि । त्यसो भनेर भएन दाजु । अन्तिम सँस्कार सबैको हक हो । राम्ररी गर्न पाउनुपर्ला कि?
@dipakbhattarai दाजु, पशुपतिमा त नगाडेकै राम्रो । त्यो जँगलमा मँगल गर्ने यूवा यूवतीको भीड छ । कहाँ आफू गडेको ठाँउमुनिवाट केके भा'को हेर्नु ?
@dipakbhattarai लौ, जलाओ भन्दिउँ न त, उसोभए ! इलेक्ट्रिक शवदाह गरे झन् राम्रो !
@dipakbhattarai दाजु, म नी उहि क्रिस्तानी धर्मावलम्वी हुँ । कसम, पैसा लिएर धर्म परिवर्तन गरेको होईन । म मरे पछि मलाई कहाँ गाड्न दिन्छौ ?
@aakarpost @dipakbhattarai @svbel पशुपती क्षेत्रमा त कुनै हालत मा पनि त्यसो गर्न दिनुहुँदैन.. अन्तै कतै भए पनि जग्गा उपलब्ध भने गराउनै पर्छ
@aakarpost @dipakbhattarai अनि सँस्कारमै जलाउने छैन भने चाँहि भुत्रो गर्नु। हिन्दुलाई नजला, गाड भनेजस्तो। मुस्लिमले र जनजातिले के गर्ने हो?
@dipakbhattarai सरि ल, दाजु अलिक आवेशमा आईयो। यो बकमफुसे कुरा पढ्दापढ्दा दिक्क छु । नेपाली क्रिस्तानी हुन या हिन्दु केहि ठीक गर्न सक्दैनन्।
@svbel @dipakbhattarai गाउँले ले चिहानघारी बनाउन नदिएको पनि राम्रै हो । जलाउने व्यवस्था नै उत्तम हो ! @nepaleeidiot आज त आन्दोलन नै छ क्यारे
@dipakbhattarai सरकारले एउटा ठाउ तोकिदिए भो । चर्चहरु मिलेर जग्गा किनेका छन् । एउटा लेले मा, अर्को ओखरपौवामा । तर गाउलेले गाड्न दिन्नन् ।
@dipakbhattarai मेरो त त्यो बिदेशी मेशिन आ'को छ रे झ्याप्पै पार्ने । खरानी जीवन, खरानी बनोस् । म त त्यस्को पक्षमा हो ।
dipakbhattarai Dipak Bhattarai
@dipakbhattarai @aakarpost @svbel @nepaleeidiot मलाई पशुपति र अन्तमा फरक छैन। मात्र काठमाडौंमा भाका खाली ठाउँ जति चिहानले भरिने भए भन्ने हो
@aakarpost @dipakbhattarai @svbel धार्मिक सदभाव खलबलिनु भने हुँदैन भन्ने मेरो बिचार है
@svbel @dipakbhattarai उसोभए समाधान के त ? पशुपति मै गाड्न पाउनु परो भनेर किन निहुँ खोज्नु ? अन्तै लगेर, गाड्नु नि, गाउँले ले दिने ठाउँमा !
@dipakbhattarai अनि त्यो मेशिन पनि फेरि पशुपतिमै छ रे । क्रिस्तानीहरु पनि खुसी हुने भए । पशुपतिनै चाहि के खान चाह्यो रे मेरा वरादरीलाई?
@dipakbhattarai @svbel @nepaleeidiot पैसाको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने कारण,सहानुभुति जाग्दैन।लाश गाडेर,वातावरण दुषित गर्न पाइँदैन ।
@dipakbhattarai @aakarpost अव शहरको बिचैमा सामाखुसी हाईटैमा बेलायतीहरुले चिहानडाडा बनाउन हुने । नेपालीलाई चाहि गाड्न नहुने । बिदेशी हुनुपरो।
@aalupyaj हामी बहस पनि गर्चम कहिले काहिँ #twitter मा .. अर्ती उपदेश देखी वाक्क लागे यसो आफ्नो बिचार पोख्दा हुन्च @aakarpost@dipakbhattarai
@dipakbhattarai @svbel @nepaleeidiot पैसाको खोलो बगाएर धर्म परिवर्तन ! http://www.bolnadeu.com/?p=879 त्यै भ'र सहानुभुति जाग्दैन !
@dipakbhattarai @aakarpost त्यसैले त राम्रो पार्क बनाएर ठाउ तोकेको सहि नी । अलिक शहर बाट पर्तिर गर्नु । मान्छे नी जान्छन्, आफ्नोलाई सम्झन।
@aakarpost @nepaleeidiot @dipakbhattarai @svbel @ekendraकामचलाऊले काम चलाउन अहिलेको लागि अन्यत्र अस्थाई क्षेत्र दिए नि कामचल्दै गर्छ :)
SuvidhaSewa Suvidha Sewa
@eracube @nepaleeidiot @dipakbhattarai @svbel @ekendraकामचलाउ ले निर्ने नगरे हुने हो ! :P
@nepaleeidiot @aakarpost @dipakbhattarai @svbel @ekendraप्रधानमन्त्रि सँग वार्ता हुदै छ रे, अब के टुंगो लगाउछन खै ....
@aakarpost @dipakbhattarai @svbel @ekendra पशुपती त कुनै पनि हालत मा दिनु हुँदैन ...यसमा त हामी एकमतै छौं नि
@nepaleeidiot @svbel ती सन्की पत्रकार को भो-नकुरागरम !!! @dipakbhattarai लाई थाहा छ, काभ्रे मा के गरेछन् भनेर ! :D
@nepaleeidiot @dipakbhattarai @svbel धार्मिक रित नै गाड्ने भएपछि, गाड्न दिइनुपर्छ तर पशूपति नै चाहियो भनेर, निहूँ खोज्न चैँ पाइँदैन भन्या हो
@aakarpost @dipakbhattarai फेरि भन्छु पशुपतिमै गाड्न पाउनुपर्छ भन्नु चाहि निहुनै खोजेको मान्छु। अरुले गाड्न पाउने भए पाउनुपरो नत्र अर्को ठाउ
@aakarpost @dipakbhattarai पशुपतिमा गाड्ने क्रिस्तानीहरुले मात्रै गर्दैनथे । मेरा जनजाति साथीका केहि आफन्त पनि त्यो जँगलमा गाडिएका छन् ।